Ebe ụgbọ elu na Nairobi ka ọ bụ Addis Ababa? Kenya Kenya na-eburu ụzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ebe ụgbọ elu na Nairobi ka ọ bụ Addis Ababa? Kenya Kenya na-eburu ụzọ
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Estonia • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
ọdụ ụgbọ elu Kenya
Asọmpi ya na Addis Ababa, Nairobi chọrọ ịbụ mpaghara ọdụ ụgbọ elu mpaghara ọwụwa anyanwụ Afrịka. Nke a bịara doo anya mgbe SkyTeam Member Kenya Airways na-asọmpi ugbu a na Star Alliance Member Ethiopian Airlines iji mee Nairobi isi obodo mpaghara ọdụ ụgbọ elu na mpaghara ahụ.
Kenya Airways chọrọ ya niile, gụnyere iweghara njikwa nke Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) na Nairobi. Ebuputara ụdị ihe a na Kenya Airport Authority (KAA) dị ka akụkọ akụkọ mpaghara si kwuo.
Jonny Andersen, MD, KAA kwuru na akwụkwọ anamachọihe ahụ, nke gosipụtara etu Kenya Airways ga-esi kwado ma bulie azụmaahịa ụgbọelu na Kenya, a ga-enye ya ma ọ bụrụ na o nweta nkwado site n'aka onye na-ahụ maka ọdụ ụgbọelu. Na mgbakwunye, KAA ga-enwerịrị afọ ojuju na atụmatụ a ga-ekwe omume ma nye ego maka ego maka KAA na ọhaneze tupu itinye ya n'ọrụ.
KAA ahọpụtala onye ndụmọdụ iji nyere aka ma duzie ya. Kenya Airways ga-ejikọ ọnụ na KAA dị ka akụkụ nke nnukwu atụmatụ iji mee ka mgbake ụgbọ elu ahụ sie ike ma mee ka ọnọdụ Nairobi dị ka ebe njem mpaghara.
Kenya Airways ga-ewe ndị ọrụ na arụmọrụ nke KAA. Mbugharị a ga-agbasawanye ọrụ nke ụgbọelu iji gụnye njikwa ala, mmezi, nri, ebe a na-akwakọba nri na ibu.
Mpaghara akụ na ụba pụrụ iche ga-apụta gburugburu JKIA.
A na-atụ anya gọọmentị ịkwado njikọta ọnụ site na ịhapụ ndị ọrụ ụgbọ ala ụfọdụ n'ụtụ ụfọdụ.
Zurich-Montego Bay na-enweghị nkwụsị ụgbọ elu na-arụ ọrụ egwuregwu ...
Ugbo ala, Drones, Autonomous ugbo ala ga-akpụzi Tourism ...
Ọnọdụ mberede: Japan machibidoro ndị niile na-ekiri ihe nkiri na ...